Akhriso: Qodobo xasaasi ah oo ay ku heshiiyeen Uhuru iyo Muuse Biixi – Hornafrik Media Network
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa soo saaray bayaan wadajir ah oo ay ku xusan yihiin arrimo ay ku heshiiyeen, kadib wadahadallo ay saaadihii la soo dhaafay ku yeesheen magaalada Nairobi ee dalka.
Sida ku xusan war murtiyeedka wadajirka ah, labada hoggaamiye ee ku kulmay Nairobi waxay hoosta ka xariiqeen afar arrimood oo waqti cayiman lagu dhaqaaqyo, si loo muujiyo saameynta wadashaqeynta.
1 –In Kenya ay qunsuliyad ka furato magaalada Hargeysa ilaa dhammaadka bisha March ee sanadka 2021-ka. Muddadaas gudaheedana Somaliland waxay sii horumarineysaa howlaha xafiiskeeda Nairobi.
2 –In Shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways iyo shirkadaha nooceeda ah ee laga leeyahay Kenya ay billaabaan duullimaadyo toos isaga kala gooshada Nairobi iyo Hargeysa meeshii loo gaaro dabayaaqada bisha March ee 2021-ka.
3 –In saraakiisha sar-sare, oo liiskooda lasoo gudbinayo, ay dal ku galka ku qaataan gudaha Kenya marka ay u soo safraan, taasoo la hirgalinayo ilaa dhammaadka bisha March ee 2021-ka.
4 –In saraakiisha sar sare ee Kenya iyo Somaliland ay isku waafaqaan xogta iyo waqtiga la hirgalinayo barnaamijyo isweydaarsi ah oo lagu hormarrinayo Xirfadleyda beeraha, Ardayda, Dhakhaatiirta, kalkaaliyeyaasha iyo xirfadleyaasha kale.
Safarka Madaxweyne Muuse Biixi ee Nairobi waxuu soo dedejiyey in dowladda federaalka Soomaaliya xiriirka u jarto dowladda Kenya, iyadoo ku eedeyneysa inay ku xadgudubtay maadx-banaanida iyo wadajirka Qaranka Soomaaliyeed.
Dowladda Soomaaliya waxay saqdii dhexe ee xalay diblomaasiyiinta Kenya ka jooga Soomaaliya ku amartay inay todoba cisho dalka uga baxaan, iyadoo u yeeratay dhamaan diblomaasiyiinta ka joogta Nairobi.